Axmed Madoobe oo booqday Saldhig lagu diyaarinayo ciidamo duulaan ku ah Al-Shabaab | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Axmed Madoobe oo booqday Saldhig lagu diyaarinayo ciidamo duulaan ku ah Al-Shabaab
Axmed Madoobe oo booqday Saldhig lagu diyaarinayo ciidamo duulaan ku ah Al-Shabaab
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta kormeer ku tagay deegaanka Cabdalla Biroole ayaa booqday Saldhiga Ciidanka Darawiishta Dowlad Goboleedka Jubbaland ay halkaas ku leeyihiin.
Axmed Madoobe ayaa waxaa kormeerka ku wehelinayay Taliyaha Guud ee Ciidamada qalabka sida ee Jubbaland janaraal Aadan Maxamuud Ibraahim waxaa uu halkaas kula hadlay Cutubyo katirsan Ciidamada jiida hore ku sugan isagoo sheegay in la qaadi doono howlkii ugu danbeeyay oo Jubbaland ay dhulkeeda ku xoraynayso.
Waxaa uu wuxuu intaas ku daray in isku furida Magaalooyinka xorta ah iyo xoraynta kuwa aan wali gacanta ku jirin ay isku mar noqon doonto dhamaan Ciidamada kala duwana ay heegan buuxa ku jiraan isagoo hoosta ka xariiqay in ay tahay wax wanaagsan oo lagu faano in ay Ciidamada Soomaalida kaliyah duulaan qaadi karaan oo ay dhulkooda xorayn karaan.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in cabdalla Biroole deeganada ku dhow sida ugu dhakhsiyaha badan loo xorayn doono isla markana dhamaan jidadka la furayo.
Jubbaland ayaa ah Dowlad Goboleedka kaliyah ee Ciidamadeedu sida joogtada ah ugu jiraan howlgalka difaaca iyo xoraynta iyadoo hada ay isku diyaarinayso in dharbaaxadii ugu danbaysay ay ku dhufato Al-Shabaab.
Previous articleKhilaaf ka dhashay Taliye cusub oo ciidamada Nabadsugida Sh/dhexe loo magacaabay
Next articleMadaxweyne Laftagareen oo si rasmi ah ula wareegay Madaxtinimada Koofurgalbeed